Microsoft Office 365 miaraka amin'ny SharePoint: The Combinable Perfect | NY
Microsoft Office 365 miaraka amin'ny SharePoint: The Combination Perfect
Microsoft Office 365 sy SharePoint
Ataovy ny fifandraisana
SharePoint sy Office
Tsindrio ny Microsoft Knot
Microsoft Office dia manana tanjona ny ho fototry ny tontolo iainana miasa, ary ny Office 365 dia nanampy fotsiny ny lanjan'ny fifanarahana. Ny Skyhigh Networks raharaham-barotra Cloud nahita fa ny fitantanana no fitaovana fampiasan'ny rahona amin'ny fampiasana rahona amin'ny ankapobeny. Ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny fitaovana malaza dia ny fiaraha-miasa amin'ny rindrambaiko hafa mahasoa, mampitombo ny fahombiazany sy ny fahombiazany.
As Office 365 dia miova tsikelikely, toy izany koa ny SharePoint, fitaovana fiaraha-miasa Microsoft. Amin'ny fampiasana SharePoint, ny vondrona dia afaka miara-miasa amin'ny hetsika tahaka izany, miaraka amin'ireo fanavaozana azo tsidihana tsikelikely. Raha tsy mahatsapa ny fahatahorana ireo antontan-taratasy mifandraika amin'ny hafatra sy ny miverina, dia afaka manasonia toerana iray ny manam-pahaizana ary hahita ny famerenana farany amin'ny rakitra tsirairay.
Mba hahazoana tena mahasoa dia aoka ho toy izany, ny fandaminana roa dia tokony hifampidinika, toy ny mpiray tsikombakomba amin'ny fanambadiana tsy mendrika. Ireto misy zavatra roa azony eritreretina momba ny fampiasana Microsoft Office 365 ary SharePoint amin'ny sehatra mitovy amin'izany ary ny fiarahan'izy ireo miara-miasa tsara.
Mba hanaovana an'io asa tsy misy fika io, ny fifandraisana amin'ny SharePoint amin'ny Office 365 dia atao amin'ny alalan'ny Connect to Office Office ao amin'ny SharePoint Server. Any, afaka miditra, manara-maso, ary mamonjy fikambanana amin'ny rindrambaiko. Na izany na tsy izany, ny antsipiriany momba ny fiarahan'ireo dingana roa dia vao haingana ny alina - ary ny ampahany kely monja amin'ny dingana. Ny vondrona misy anao koa dia mila mandamina mialoha ny fotoana hiarahanao amin'ny mpivady vaovao.
Na dia eo aza ny famaritana hoe iza amin'ireo orinasam-pandraharahana dia azo atao amin'ny alalan'ny SharePoint, ny mpitantana dia mila misafidy izay tokony hajaina sy hanova ny zon'ny tsirairay amin'ny fivoriana SharePoint, ary ny fomba hiatrehana ireo zo ireo amin'ny fandrosoana. Rehefa miasa miverimberina ny mpiasa, manangana fomba fiasa sy rafitra ho an'ny fanovana ny fanovana araka ny tokony hatao amin'ny fomba mahomby dia maika.
Ny taratasy fangatahana mangarahara dia manao asa fanambadiana mendri-kaja, ary ny SharePoint dia mamaritra ny fomba hanokafana indrindra azy ireo amin'ny fomba itenenany amin'ny Office 365 sy ny mpanjifa farany. Araka ny asehon'i Microsoft ao amin'ny tranonkalany, SharePoint dia hita amin'ny endrik'ilay mpanjifa amin'ny alàlan'ny programa iray web, izay ahafahany mijery karazana singa. Ny mpividy dia afaka mikaroka tahirin-kevitra, mandefa ny rakitra ao amin'ny OneDrive, miasa miaraka amin'ny hafa, na manome ny antontan-taratasy misy antontan-taratasy ao amin'ny vondrona misy azy. Vantany vao tafapetraka, dia azo atolotra ho an'ny fikambanana iray manontolo ao amin'ny SharePoint ny rakitra. Ny interface interface dia mahatonga azy ho tsotra ho an'ny vondrona iray manontolo hamantatra ny zava-mitranga ary mahatonga azy io ho mora ahafahana manokatra amin'ny programa web.
Talohan'ny fampiroboroboana fitaovana iraisam-paritra tahaka ny SharePoint, ny fanaraha-maso ny fanarenana dia nofinofy ratsy - na izany aza ho an'ny mpanjifa farany. Tamin'izany fotoana izany, raha nisy manam-pahaizana nanao tahiry tao amin'ny Microsoft Word na Excel ary nalefany tamin'ny alàlan'ny mailaka, dia afaka mandinika ny fanavaozana averina indray ilay mpandray tombony. Raha tsy nampiasa ny fanovàna amin'ny alàlan'ny fanovàna ny antontan-taratasy ilay mpandray tombony, dia mila miverina ny vondrona raha toa ka tokony hovana ny fanovana.
Na izany aza, amin'izao fotoana izao, ny haavon'ny Microsoft SharePoint dia tsy manome fotsiny ny fahadisoana avy amin'ny endrika samihafa fa satria ny tsirairay kosa miasa amin'ny toerana mitovy, dia misy ihany koa ny famoahana tantara izay ahafahan'ireo mpanjifa mandinika ny venty amin'ny alàlan'ny rakitra iray.
Na dia eo aza ny fitaovana samihafa hita maso, ny Microsoft PowerPoint dia mbola fitaovana malaza indrindra ho fampidirana. Na izany na tsy izany, amin'ny alalan'ity fifandraisana vaovao ity, dia tsy tokony hanana toerana toy izany intsony ianao mba hanehoana amin'ireo mpiara-miasa ara-barotra. Amin'ny fampiasana SharePoint, azonao atao ny manolotra ny fampidiran-dresaka PowerPoint ho an'ny mpanjifa sy ireo mpiara-miasa manerana an'izao tontolo izao miaraka aminà klika roa monja. Na inona na inona ampiasainao izany amin'ny fampifangaroana videô-chat na manokana, ity fifanarahana ity dia hanampy anao hisoroka ny fotoana sy ny fananana.
Ao anatin'ireo sendikà tsara indrindra, ireo mpiray tsikombakomba dia miasa mba hifankahery. Ireo hevitra misongadina ao amin'ny SharePoint dia miditra ao anatin'izany Microsoft Office zavatra ary antontan-taratasy misimisy kokoa. Ny fisehoan-javatra lehibe indrindra dia DocuSign, izay afaka manampy amin'ny fanamarihana ny fahaiza-manaon'ny fifanarahana, ny toro-marika ary ny antontan-taratasy samihafa. Satria ny ampahany betsaka amin'izany dia misy ao anatiny SharePoint, ireo manam-pahaizana dia afaka manamboatra fomba fiasa sarotra be loatra, mitazona ny zava-drehetra amin'ny toerana iray ho an'ny tsy dia manahirana loatra.
Microsoft Office 365 dia naka ny rindrambaiko mahazatra indrindra momba ny birao ho an'ny rahona, ka mahatonga azy ireo tsy dia mitaky ny hanara-maso ny orinasa. Amin'ny fotoana Office 365 dia mifamatotra amin'ny SharePoint, ny mpitantana dia afaka manao fototra iray izay ahafahan'ny mpiara-miasa amin'ny ankamaroan'ny ekipa misongadina ary manolotra mpiara-miasa ivelany. Ny vokatra farany dia fitomboana amin'ny fahombiazany, izay midika fa ny olona rehetra dia hahavita hatramin'ny farany kokoa, hanampy ny orinasa haingana.
Amin'ny maha-mpitantana iray izay manantena ny handray soa avy amin'ireo zavatra fantatry ny Microsoft, dia misy ny ezaka manokana azonao atao mba hiantohana ny fahaizanao manokana sy ny fianarana hanao ny fanambadiana. Ho an'ny sasany izay manantena ny hamolavola ny fahaiza-manao amin'ny fampiasana ny Microsoft Office 365 sy SharePoint, ny dingana voalohany dia manomana matetika ny Microsoft MCSA: Fanamarinana ny Office 365.
Rehefa tafiditra ianao Office 365, ento miaraka aminao ny fifandraisanao amin'i Microsoft amin'ity ambaratonga manaraka ity MCSE: Fahombiazana mahomby hiadiana amin'ny SharePoint.